Maitiro ekugadzirisa Matambudziko angu pa Twitter? ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Dai 12, 2021 0 mashoko 562
With the Twitter Rubatsiro Center, Mushandisi anogona kugadzirisa matambudziko ane chekuita neAkaunti Akaundi: Kupinda, Akaimiswa Akaunti, Akahodha Mbiri uye nekuvandudza kuchengetedzeka kweAccount yake papuratifomu.
Mushandisi anogona kugadzirisa matambudziko ezvese zvekushandisa: Notifications, mapikicha nemavhidhiyo, mibvunzo ine chekuita neProfile yake, Chitupa chekuziva, kushungurudzwa kana kushungurudzwa, phishing kana spam uye zvemukati zvemukati.
Mushandisi anoziviswa muTwitter Rubatsiro Center yake Mitemo neMitemo Kushandiswa kwesocial network; Izvi zvinokutungamira kana uchigadzira zvinyorwa, kutora chikamu munhaurirano, muMamessage, kuti usaite chero rudzi rwekushungurudza uye kutyora mitemo.
Nyowani Twitter Tip Jar chimiro
Twitter yataura nezve nyowani basa rinonzi Tip Jar, muchiSpanish zvinoreva chirongo chemazano; izvo zvichaita kuti Mushandisi abhadhare vamwe zvekubata maziso, zvinokurudzira, zvine hungwaru uye zvinokurudzira Tweet.
Zvinoenderana neTwitter, Mushandisi anoziva kuti a Akaunti inogoneswa yetip Jar paunocherekedza Tip Jar icon padivi peKuteedzera bhatani pane yako Mbiri peji. Kuti ubhadhare, iwe unofanirwa kudzvanya pane icon uye yekubhadhara menyu iyo iyo Mushandisi yakagonesa ichaonekwa.
Tevere, sarudza iyo yekubhadhara sevhisi iwe yaunoda uye ichave iri kutamiswa kubva kuTwitter kune saiti iwe kwaunogona kuratidza rutsigiro rwako muhuwandu hwaunosarudza. Zano Jar rinosanganisira masevhisi akadai se: PayPal, Venmo, Patreon, Cash App uye Bandcamp.
NEI KUTI TIWANISE SOURCE TEKI PANE TWEET?
Basa re Font Tags del Tweet ndeyekubatsira Mushandisi kuti aone zviri nani kuti Tweet yakaburitswa sei. Aya maTags, anowedzera mamwe mamiriro kuTwitter nemunyori wayo, zvichirerudzira dudziro irinani uye kunzwisisa kwechinangwa chayo
Kana Mushandisi asingazive kwainobva, zvinoda tsvaga rumwe ruzivo uye sarudza kana zvirimo zvakavimbika; Kuti uite izvi, unofanirwa ku: Dzvanya paTwitter kuti uende kune peji reruzivo; Pazasi peTweet ndiyo Source Tag, semuenzaniso: Twitter yeApple.
Iyo Twitter Tag yeVashambadziri muTweets inoratidza kuti maTweets akagadzirwa vachishandisa iyo Musiki weTwitter Ads. Mune zvimwe zviitiko, Mushandisi anogona kucherechedza kuti mamwe maTweets anouya kubva kune chishandiso chisiri Twitter.
Taura nyaya yako wega pa Twitter
Kana Mushandisi achida taura nyaya yako wega, Twitter inopa mabasa aya.
Uye zvakare, Mushandisi anofanira gara uchigovana nenharaunda yako uchishandisa Retweets vakataura kana kwete, tumira mapikicha nemavhidhiyo nevateveri vako nenharaunda yako kuti ubate zvakanyanya.
Mushandisi anoda kugovana zviri kuitika parizvino rarama nguva; uye gadzirisa yako Mbiri, pano iyo biography inofanira kugara ichivandudzwa uye yako yazvino meseji yakatumirwa kumusoro.
1 Nyowani Twitter Tip Jar chimiro
2 NEI KUTI TIWANISE SOURCE TEKI PANE TWEET?
3 Taura nyaya yako wega pa Twitter